Cuntada La Cuno Habeenkii Xilliga Dambe Oo Sabab U Noqota Wadne Xanuunka Iyo Faaligga. - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Cuntada La Cuno Habeenkii Xilliga Dambe Oo Sabab U Noqota Wadne Xanuunka...
Digniin ay soo saareen khubaro aqoon badan u leh dhinaca caafimaad, ayaa lagu sheegay in cuntada la cuno xilliyada dambe ee habeenkii ay keeni karto halis caafimaad-darro oo ay ka mid tahay in qofku wadne-xannuun iyo falalig ku dhaco.
Kooxda khubarada ah oo cilmi-baadhis ku sameeyey arrintan, ayaa sheegay inay ogaadeen in raashinka la isticmaalo saacadaha dambe ee waqtiga habeenka ah ay sababi karto caafimaadka qofka oo halis gala.
Khubaradan oo xannuunada wadnaha ku dhaca ku takhasusay, ayaa soo jeediyey in aan dadku aanay qaadan cunto wax ka yar laba saacadood ka hor xilliga uu seexanayo, waxa ay si gaar ah u xuseen in wixii toddobada habeennimo ka dambeeya aanu qofku wax cunin.
Daraasaddan oo laga qaaday dad ka badan 700 qof oo leh dhiig-kar, waxa lagu ogaaday in haddii qofku cunto cuno laba saacadood ka hor xilliga uu seexanayo in dhiiggoodu kacsanaanayo, waxaanay ogaadeen cilmi-baadhayaashu in cuntada uu qofku ku seexday ay keento in jidhku soo daayo hormoonada isku buuqa, marka uu jidhku bilaabo inuu nasto, taasina ay aakhirka keento in qofku wadno-xannuun amma faalig ku dhufto.
Cilmi-baadhe magaciisa la yidhaha Dr.Ebru Dr Ebru Özpelit oo natiijada daraasadooda ku soo bandhigay shir ay lahaayeen Ururka dhakhaatiirta xannuunada wadnuhu ee dalalka Yurub ku bahoobeen (European Society of Cardiology Congeres) oo ka qabsoomay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga, ayaa yidhi; “Haddii aan habeenkii illi dambe wax cuno jidhku waxa uu caadi ahaan noqonayaa mid feejigan, sida uu maalintii yahay oo kale, halkii uu nasan lahaa inta qofku hurdo. Hormoonada isku buuqa (Stress hormones) ayaa jidhku sii daynayaa, taasina waxay keentaa in dhiig-kar ku dhaco, halkii uu hoos u dhici lahaa inta uu qofku hurdo.”
Dr Özpelit oo ka tirsan Jaamacadda Dokuz Eylül University ee dalka Turkiga, ayaa sheegay in daraasadoodu soo saartay digniintaas, loona baahan yahay in dadka waaweyn ka taxadiraan khatarta ka dhalan karta inuu habeenkii ku seexdo cunto culus.